शिवम् सिमेण्ट्सको नाफा १ अर्बभन्दा बढी , जगेडा कोष रकम ७ प्रतिशत बढ्यो - Aarthiknews
शिवम् सिमेण्ट्सको नाफा १ अर्बभन्दा बढी , जगेडा कोष रकम ७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म शिवम् सिमेण्ट्स लिमिटेडले रू. १ अर्ब ९ करोड ८० हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. ८६ करोड १५ लाख ६७ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष साढे २५ प्रतिशत नाफा बढाएको हो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी ४ प्रतिशत बढी भएकाले पनि नाफामा बृद्धि देखिएको हो । गत वर्ष रू. ७ अर्ब ९ करोड ५३ लाख ६४ हजार कुल आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ७५ हजार कुल आम्दानी गरेको हो । गत वर्ष रू. ६ अर्ब ६ करोड ५५ लाख ३८ हजार कुल खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ६ अर्ब ९ करोड ३१ लाख २६ हजार कुल खर्च गरेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ४० करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष ७ दशमलव ३३ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. ४ अर्ब ७२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्ष रू. ५ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ४२ हजार पुगेको हो । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३३ दशमलव ३ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २१५ दशमलव ३८ रहेको छ ।